Tanterahina amin’ny Finoana ny Zava-drehetra - Marcus B. Nash
Nataon’ny Loholona Marcus B. Nash
Ny finoana dia hanampy antsika hihanika soa aman-tsara ilay lalan’ny filazantsara sy handresy ireo olana rehetra eto amin’ny fiainana an-tany ary hanampy antsika hiverina eo anatrehan’ny Raintsika any an-danitra feno voninahitra.
Vao tsy ela akory izay no nihanihan’ny ankamaroanay tao amin’ny fianakaviana Nash teny an-tampon’i Huayna Picchu, izay tampon-tendrombohitra lehibe eo akaikin’ny zavatra sisa tavela tamin’ny lasan’ireo Incan fahiny any Machu Picchu any amin’ireo tendrombohitr’i Pérou. Tena nideza ny lalana nihanihana sady nahatazanan-javatra nampitolagaga ary nisy lalana nitsotsorika tampoka koa. Ny nampalahelo dia nisy mpihanika sasantsasany namoy ny ainy noho ny fianjerana teny amin’izany lalana ety sy mideza izany. Mba hisorohana ny zava-doza toy izany dia nasiana randrantady vy naraikitra amin’ilay vatolampy mafy ka manaraka ny lafiny ilan’ny tendrombohitr’i Huayna Picchu. Nihazona izany randrantady vy izany izahay rehefa nihanika ary nanome fahafahana anay ho tonga teny amin’ny tampony ka nahatalanjona ny zavatra tazana avy teny!
Mideza sy sarotra ihanihana toy ny lalana nankeny Huayna Picchu ny diantsika eto an-tany, izay mitaky ny fanampian’ny Raintsika any an-danitra mba hamitana azy. Noho izany antony izany dia nametraka fitsipika sy ôrdônansin’ny filazantsara Izy mba hitondra antsika any amin’ny Mpamonjy sy hahazoantsika ilay heriny mitondra famonjena.1 Ny voalohany amin’ireo fitsipika ireo, ny finoana an’i Jesoa Kristy Tompo,2 dia toy ireo randrantady vy teny amin’i Huayna Picchu: Raha toa ka mafy orina sy mifatotra tsara amin’ny “vatolampin’ilay Mpanavotra” antsika3 ny finoana, dia hanampy antsika hihanika soa aman-tsara ilay lalan’ny filazantsara izany sy handresy ireo olana rehetra eto amin’ny fiainana an-tany4 ary hanampy antsika hiverina eo anatrehan’ny Raintsika any an-danitra feno voninahitra. Tanterahina amin’ny Finoana ny Zava-drehetra.5
Fitsipika sady mifono asa no mifono hery ny finoana.6 “Tsy fananana fahalalana tomombana ny zavatra [izany]; noho izany, raha manam-pinoana [isika], dia manatanteraka ny zavatra izay tsy hitan[tsika] kanefa marina.”7 Fahatokiana8 azo avy amin’ny fandalinantsika izay mitondra antsika hanao asa9 mba hanaraka ny ohatra nasehon’ny Mpamo